News - Graphite electrode CN obere akụkọ
Na ọkara nke mbụ nke afọ 2019, ahịa electrode nke ụlọ gosipụtara ọnụ ọgụgụ nke ọnụahịa na-abawanye na ịda. Site na Jenụwarị ruo June, mmepụta nke 18 isi graphite ndị na-emepụta electrode na China bụ tọn 322,200, elu 30.2% kwa afọ; Ihe mbupụ electrode nke China bụ tọn 171,700, elu 22.2% site na ọnwa gara aga.
N'ihe banyere ọdịda dị oke ọnụ ahịa ụlọ, onye ọ bụla etinyela isi ya n'ahịa mbupụ. Site na nkezi ọnụahịa nke ụlọ graphite electrode na-ebupụ site na Jenụwarị ruo June, enwere ike ịhụ na ọ bụ ezie na usoro niile na-agbadata, ndagwurugwu kachasị dị ala pụtara na Eprel, na $ 6.24. / n'arọ, ma ka dị elu karịa ọnụahịa ụlọ ụlọ n'otu oge ahụ.
Na usoro nke ukwu, kwa ọnwa nkezi mbupụ nke anụ ụlọ graphite electrodes si Jenụwarị na June 2019 dị elu karịa nke afọ atọ gara aga. Karịsịa afọ a, mmụba nke mbupụ na-apụta ìhè. Ọ nwere ike hụrụ na mbupu nke Chinese graphite electrodes na esenidụt ahịa abawanyele na afọ abụọ gara aga na-emekarị.
Site na mba ndị na-ebupụ mba, Malaysia, Turkey na Russia bụ ndị isi mbupụ atọ na mba ndị ahụ site na Jenụwarị ruo Juun 2019, ndị India, Oman, South Korea na followedtali sochiri.
Na ọkara nke abụọ nke afọ, site na mmụba na-ebuwanye ibu nke electrodes buru ibu, a ka ga-anwale ọkwa ọnụahịa ugbu a, asọmpi zuru ụwa ọnụ nke ngwaahịa ga-abawanye dabere. A na-eme atụmatụ na mbupụ nke electrode nke China ga-abawanye site na 25% na 2019.